The Letterpress, typography, ary pulp fiction | Martech Zone
The Letterpress, Typography, ary Pulp Fiksi
Talata, Aprily 3, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Na dia geek teknolojia lehibe aza aho dia tiako ny manonta. Ny asako voalohany avy tany amin'ny tafika an-dranomasina dia toy ny elektrisista ao Ilay Virginian-Pilot. Tiako ny fofon'ny ranomainty amin'ny taratasy - angamba izany no antony tiako mpamaky sy tia boky mafy. Sarimihetsika kely tsara amin'ny kanto very an'ny Letterpress io. Tsy niasa tamin'ny Letterpresses mihitsy aho fa ny namako maro no nanao izany niarahako tamin'ny Gazety izany.
Teo no nanomboka ny typography! Mangatsiatsiaka loatra. Ampitahao amin'ny WarTypeFonts io sarimihetsika io, fijerena ny fivoaran'ny endritsoratra nandritra ny vanim-potoana, izay naseho ara-potoana sy sary tamin'ny alàlan'ny ady:
Ilay tale, Carlos Florez, dia manana horonan-tsary misy vahaolana avo kokoa izay tsara kokoa hojerena ao amin'ny tranokalany.
Ary mbola misy fijerena hafa ny fampiasana typografika (TANDREMO: Fiteny ho an'ny olon-dehibe) amin'ny alàlan'ny sarimihetsika:
Ary ity horonantsary mahatalanjona antsoina hoe The Child nataon'i Alex Gopher (hita tamin'ny Blog famoronana famoronana nataon'i David Airey):
Tags: Alex gopherCarlos florezdavid aireyfampiasana fonthoronan-tsaryendritsoratraletterpressny zazaTypographyhoronan-tsarimihetsikawartypefonts
Spring Break ity?
Teory oroka veloma veloma: ny fahazaran-dratsy mandringa dimy an'ny orinasa
Apr 3, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Hey nieritreritra fotsiny aho hampahafantatra anao, ny rohy video faharoa dia tsy mandeha
Misaotra isan'andro! Nanampy rohy amin'ilay horonantsary (vahaolana avo lenta) aho.